सकियो ओली-प्रचण्डबिचको ३ घण्टा लामो वार्ता, के जुट्यो सहमति ? — Imandarmedia.com
सकियो ओली-प्रचण्डबिचको ३ घण्टा लामो वार्ता, के जुट्यो सहमति ?
काठमाडौँ । साउन २ गतेलाई निर्धारित स्थायी कमिटी बैठकअघि सहमति जुटाउने प्रयासमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार पनि छलफल भएको छ ।
करिब ३ घण्टासम्म ओलीसँग छलफल गरेर अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएका छन् । दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा केही समय महासचिव बिष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए ।
तीन घण्टा छलफल भएपनि कुनै ठोस सहमति जुट्न नसकेको दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जुगलले बताए । सापकोटाका अनुसार बिहीबार फेरि दुई अध्यक्षबीच छलफल हुने भएको छ ।
दुवै अध्यक्षबीच मंगलबार पनि छलफल भएको थियो । तर, मंगलबार सामान्य छलफल गरेका ओली र दाहालबीच बुधबार भने विषयवस्तु केन्द्रीत छलफल भएको सापकोटाले जानकारी दिए । दुई अध्यक्षबीच सहमति गर्न भन्दै साउन २ सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । गत साता पनि ओली र दाहालले लगातार तीन दिन छलफल गरेका थिए ।
महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षबीचको छलफल सकारात्मक भए पनि अझै निष्कर्षमा पुग्‍न नसकेको बताए । पछिल्लो समय नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्यसहित शीर्ष नेताहरुले अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपाभित्र थप विवाद उत्पन्न भएको थियो । दुई अध्यक्षबीच बिहीबार पुनः छलफल हुने बताइएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीस बैंकमा ५.५ मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा भएको खबरमा कुनै सत्यता नरहेको ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताएका छन्।
प्रम ओलीको प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक पेजमा प्रेस नोट लेख्दै थापाले ‘ग्लोबल वाच एनालाइसिस’को हवाला दिदैं केही नेपाली अनलाइनहरूले छापेको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका हुन्।
‘स्वीस बैंकमा खाता र ५.५ मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा रहेको वा यस्तै व्यहोराका तथाकथित रिपोर्ट शतप्रतिशत गलत र कपोलकल्पित रहेका’ स्पष्ट गर्दछु’, उक्त पोस्टमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै दुर्नियतका साथ तयार गरी सम्प्रेषित यस्ता तथ्यहीन सामग्रीहरूलाई आधार मानेर समाचार बनाई नेपाली जनतामा भ्रम छर्न र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बदनाम गर्न उद्यत यस्ता कतिपय संचारमाध्यमहरूकप रवैया खेदजनक छ।’
‘राष्ट्रिय हितको रक्षा, सीमा अतिक्रमणविरूद्द नयाँ नक्सा प्रकाशनको साहसिक कदम र सर्वसम्मतिद्वारा संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण निर्णयमा सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्द गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको निकै संवेदनशील बेलामा बदनाम गराउन यस किसिमले सुनियोजित षडयन्त्र गर्ने अनेकन् तत्वहरू सक्रिय रहेको प्रष्ट नै छ’, थापाको पोस्टमा उल्लेख छ।
यसैगरी थापाले आम नेपालीहरूलाई दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न हार्दिक आह्वान गरेका छन्। सो पोस्टमा सम्बन्धित निकायहरूले पत्रकारिताको न्यूनतम जवाफदेहिता, जिम्मेवारीबोध र सामाजिक मर्यादा एवं शिष्टाचारविपरित कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।